धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निकालो यस्तो प्रेस विज्ञप्ती ! ३ करोड नेपालीले पढ्नु होला ! - Complete Nepali News Portal
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निकालो यस्तो प्रेस विज्ञप्ती ! ३ करोड नेपालीले पढ्नु होला !
ScotNepal July 11, 2019
यस परियोजनाको अस्थायी बारमा गत जेष्ठ १५ गते एकाबिहानै डोजर प्रयोग गरी अराजकता प्रदर्शन गरिएको असामान्य घटना सबैमा जगजाहेर नै छ। यसबाट सहयोगी मनहरूमा गहिरो चोट पर्न गयो र धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनको रङ्गशाला निर्माण अभियानको आधार हल्लाउने काम भयो । तत्पश्चात उत्पन्न बिषम परिस्थिति, चुनौती र कर्मचारी माथिको खतरालाई ध्यानमा राखी तत्कालका लागि निर्माण कार्य स्थगित गर्न हामी बाध्य भयौँ ।